I-booning booning Boron nitrive ye-ceramic plates ye-ceramics ye-moron yokuphatha i-moron
Eyona iFused Silicic crucible crucible, quartz smelting Clay Crucible Manufacturers isitya segolide kunye neplatinam-XTL
Eyona Nkampani yokunyibilikisa iziko lodongwe lweGraphite eCrucible-XTL
I-Boron Nitrode deide goramic rod, ekwabizwa ngokuba yigrafu emhlophe, inolwakhiwo olufanayo negrafu. Inobuqili oluhle lombane, ukuqhubela phambili kobushushu, ukuxhathisa okuqinisekileyo kwengozi kunye nokuzinza kwemichiza.
I-hexagonal ye-hexagonal icinezelweyo ye-hexagonal boron wimide ye-ceramic iimveliso ze-ceramic, zibonisa indibaniselwano eyodwa yekhemikhali, zombane, zombane kunye ne-thermal, zinokubonelela ngococeko oluphezulu lwemizi-mveliso.Silinge Isisombululo esekwe kwiindidi zabathengi becandelo.
I-Boron icinezelwe i-boron ndride yeyona isuluator yombane kwaye ayifuni mbunyane ukuba isebenze njengeoyile. I-Bn ineepropathi ezingalunganga zoomatshini, nangona kunjalo, ngokubanzi inomthamo wobushushu obuphezulu, ukuqhutywa kwengqondo okuqinisekileyo, ukomelela kwamandla eDeectoric kunye noomatshini obulula. Ukunciphisa kunye ne-InErt Asmonkes, i-Bn inokumelana nobushushu ngaphezulu kwe-2000 ℃. I-Bn iza ngokwamabakala ahlukeneyo kwifom eqinileyo nengqokelela, yonke ineepropathi ezingafaniyo.
Ukufakelwa kombane okuphezulu kunye nokuphumezelwa kwe-thermal kwenza ukuba i-Bn iluncedo njengeshushu kwizicelo eziphakamileyo ze-elektroniki. Iipropathi zayo zithelekisa kakuhle ngeBeryllium Oxide, ialuminium oxide, kunye nezinye izinto zokupakishwa kwe-elektroniki, kwaye zilula kakhulu kwimilo efunwayo kunye nobukhulu.
Indawo yobushushu ephezulu
Ukuzinza kwamaqondo obushushu kunye nokuxhathisa okugqwesileyo kwesothuso le-farmal yenza i-Bn yeyona ndawo iphambili kubushushu obukhulu obunjenge-Plasma Arc Welc, izixhobo zokukhula kwe-semicondsuctor, kunye nezixhobo zokukhula kwe-semicondufur& ukuqhubekeka.
I-Bn inorganic, i-InErt, ayisebenzi kunye neetyuwa zeHalude kunye neRegents, kwaye ayimithi ziintsimbi ezininzi ezityhidiweyo kunye nee-slags. Ezi mpawu, zidityaniswe nolwandiso oluphantsi lomhlaba, zenza ilungele izixhobo zokunxibelelana ezisetyenziswa kwiinkqubo ezahlukeneyo zentsimbi.
I-Boron wimide deramics
Ukuhonjiswa okucinezelweyo kunye ne-vapor vapor yemichiza
I-Hexagonal Boron Nitride ceramic
Izitokhwe ezininzi, ixesha lokuhambisa malunga ne-10-days. ngolwandle okanye ngomoya njengokucela umthengi
Ukuhanjiswa kwexesha ngexesha ngalinye. Nikezela ngenkonzo ethembekileyo kunye noxanduva kumthengi ngamnye ngemveliso nganye. Ithagethi yethu kukwanelisa bonke abathengi ngeyona nkonzo ilungileyo.
Bn + i-sc
I-Boron Oxide Silicon
Ukuxinana (G / CM3)
Igumbi lokuxabatha kombane (i-ω · c)
UMax usebenzisa iqondo lobushushu (℃)
Kwi-vacuum ephezulu (ixesha elide)
Amanqaku amathathu aphezulu
Amandla oxinzelelo (MPA)
Ukwanda kwe-thermal condedion (20-1000 ℃) (10-6 / k)
Ukuqhutywa kwe-thermal (W / M · k)
Icebo eliphezulu lobushushu
Iqondo lokushisa eliphezulu
Amaqondo obushushu aphezulu amaqondo omlilo
Intsimbi yensimbi yentsimbi
Isitya sentsimbi okanye iglasi yokunyibilika
Izinto ezibumbayo ze-uphonbuls zentsimbi exabisekileyo kunye ne-alloy ekhethekileyo.
Inkxaso yeqondo lobushushu ephezulu
I-nozzle kunye neThuthi yeThuthi yentsimbi enyibilikayo
- Ubushushu High zokuvala iintonga
- Iziko for Ukunyibilika Metal, ingxubevange, Rare Earth njl
- Iziko for Electron Beam Umphunga komhlaba
- umlomo for Amorphous Soft Magnetic Strip
- umlomo for Metal ukutshiza Magnetic Material Powdering
- Umphunga Boat
- zokuvala Arc kunye yomsuki weengubo for PV kunye Polysilicon Ignot zomlilo
XTL babe 7000 square metres umsebenzi ivenkile
Umgca wemveliso ezenzekelayo
Zonke iimveliso ze-prototype kufuneka zihambe kwi-4 itshekhi kuyo yonke inkqubo:
1. Uvavanyo lwezinto ezibonakalayo
2. Ukuhlolwa kwemvume
3. Uvavanyo lokugqibela
4. Uvavanyo oluphumayo
I-Inbuace yokutsala izityalo I-Xngtailong ishwankathela isiphene seemveliso zangaphambili kwaye siphucule ngokuqhubekayo. Inkcazo ye-Inbuace yokutsala izityaloIgrafu ye-greyitite isetyenziswa ngokubanzi kwi-spelting yesixhobo se-ALTEY STELS, kunye ne-Affes yabo kwi-Metallsgy, ekuphoseni, oomatshini, kunye nemiphumo emihle yezoqoqosho kunye nezoqoqosho.
Eliyinjubaqa yodongwe Sagger idla ngokuba nkulu ize isetyenziswe ukukhusela okanye iimveliso inkxaso ngexesha badubula, umzekelo glost okanye Biscuit zokudubula of tableware, okanye umgubo calcination, njl Ezi mveliso ingenziwa semi-owomileyo sikuxinile, iplastiki ngokucindezela, eziwisela .Saggars Round: Round okanye saggars elimbhoxo.Saggars Square: Square, eziziingxande, okanye ezinye saggars ezilula-ezimise.Saggars eziZodwa: Saggars ngeemilo ezintsonkothileyo.Corundum Mullite eliyinjubaqa sagger yodongwe yetreyi Clay Iziko Factory for weziko eliyinjubaqa kuthelekiswa iimveliso ezifana kwi emarikeni, oko zinezibonelelo ebalaseleyo nanto ngokwemigaqo yokusebenza, umgangatho, inkangeleko, njalo njalo, kwaye unobuhlobo igama elihle emarikeni. Xngtailong lushwankathela iziphene yeemveliso elidlulileyo iyaqhuba ukuphucula kuzo. Incazelo ye Corundum Mullite eliyinjubaqa sagger yodongwe yetreyi Clay Iziko Factory for eliyinjubaqa weziko ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zakho.
Ukuqhutywa kwesiko le-selicon carbide igrafiki ye-brass ye-brass ye-alsinum
I-SIC yethu ibethelelekileyo inika ubomi obude, ukukhawuleza ukunyibilikisa, ukukhanyisela ngokukhawuleza kunye nokunganyangeki okukhethekileyo kulwazi lobundlobongela.I-Xingtailong ngoluhlu olubanzi, olusemgangathweni olulungileyo, amaxabiso afanelekileyo kunye noyilo olusetyenziswayo, iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu, i-elektroniki ishishini, ishishini le-Atomic, amanye amashishini. I-Silicon Carbide entle isebenza kakuhle, igcinwe amandla, ukukhuselwa kwendalo kwicandelo lemveliso yezamashishini
Sinter Lithium Battery Coathod Material Fire Clay Saggar yodongwe
Saggar By Battery Material, elinjubaqa, uhlalutyo injongonjongo ephambili yale ngokuyinyibilikisa kunye sagger nqwa umgqomo ze acalulwe zokudubula kwemveliso eziphathekayo yaye isetyenziswe mveliso eyahlukeneyo. Umzekelo: Uhlalutyo amalahle, ukunyibilika na otyhidiweyo, uhlahlelo kunye zokudubula eekhemikhali izinto, uhlahlelo kunye ukunyibilikisa zeglasi, uhlahlelo kunye zokudubula izinto zomhlaba enqabileyo nezimbiwa, zokudubula ephezuluizinto ubushushu ezifana iimveliso yodongwe kunye ukunyibilika single-crystal izinto ekrwada.Kwiimeko eziqhelekileyo, okokuqala ukubeka izinto ekufuneka zihlalutywe kwaye adubula nobushushu ngokuyinyibilikisa okanye sagger.Then. Isantya zokufudumeza kunye nokwehla kwamaqondo obushushu aba bangamasebe iimpawu izixhobo kunye neemveliso, ngok okanye slow.Because of ukwanda thermal zezixhobo ekrwada apho crucibles kunye saggers zenziwa, ukufudumeza ngokukhawuleza kakhulu okanye okupholisa uya lula kukhokelela ng of i crucibles kunye saggers.The ndlela ilungileyo kuyehla, nto leyo kuyolula ubomi kubo.